Nezvesu - Ningbo Haishu Judin Packing products Co., Ltd.
Establishedmuna 2009, Judin Pack Group inyanzvi yekugadzira makapu ezvekudya zvinoraswa nemidziyo, iri muNingbo City, guta rine mukurumbira rechiteshi chengarava, tiri kunakidzwa nekufambisa kuri nyore, izvo zvakatiunzira mikana yakawanda uye mukana wemakwikwi pamisika yepasirese.Iyo kambani yakasangana nevekunze trade service timu uye manejimendi ruzivo, sezvo kushanda kwekambani kunounza hukuru hukuru.
Kuve nyanzvi mukugadzira, kugadzira nekugadzira makapu nemabhokisi, Judin Pack ine vashandi vanopfuura makumi matanhatu vane hunyanzvi, vagadziri vashanu, uye gumi nevashandi vemaneja vanosanganisira vatatu vanoongorora zvemhando, uye mumwe mushandi wenyanzvi angangoita gumi nevashanu vane makore anopfuura gumi ruzivo rwebasa, uye 25 technician vashandi vane makore anopfuura 5 kushanda ruzivo.Kubva pa8,000 square metres fekitori, yedu yekugadzira simba inosvika pamusoro pe50 HQ midziyo pamwedzi.Nekutsvagisa kwakasimba uye kugona kusimudzira uye kubatanidza kurongedza mhinduro, tinogutsa zvinodiwa nemutengi wedu zvinobudirira kubva pasirese nenyika nezvigadzirwa zvitsva gore rega rega.Tichivimba nemagadzirirwo akakwana, mhando dzakasiyana, hukuru hukuru, mitengo inonzwisisika, sevhisi yakanakisa uye kutumira panguva yakakodzera, zvigadzirwa zvedu zviri kutengeswa zvakanaka mumisika yeAmerica, Europe, uye Asia.
Kambani yedu ine makore gumi nerimwe ruzivo mupepa chigadzirwa kurongedza.Isu tinopa zvigadzirwa kune akati wandei anozivikanwa mabhizinesi akadai seBirgma muSweden, Carrefour muSpain neFrance, uye Lidl kuGermany.
Tine michina inoshanda uye yepamusoro-soro yekudhinda-Heidelberg, inogona kupa flexo kudhinda, offset kudhinda, uyewo dema PET firimu, goridhe stamping uye humwe hunyanzvi.Kambani yedu yakasimbiswa yeEUTR, TUV uye FSC chitupa.Zvigadzirwa zvinogadzirwa pasi pekutariswa kwevanokwanisa zvakanyanya, vakajairwa vakaongororwa uye vane ruzivo vatariri.
Kutevedzera mutemo we "Kuvimbika, Basa, Kushandirapamwe, Kuvandudza", Judin Pack vari kutarisira kutowedzera kubatana nevatengi vese zvinoenderana nemabhenefiti. Ndapota inzwa wakasununguka kutibata kana kushanyira fekitori yedu kuti uwane rumwe ruzivo.